Burcad isku deyday inay dhacaan will uu sarkaal dhalay oo Muqdisho lagu qabtay. – Hornafrik Media Network
Burcad isku deyday inay dhacaan will uu sarkaal dhalay oo Muqdisho lagu qabtay.
By HornAfrik	 On Aug 31, 2018
HornAfrik-Ciidamada Booliska saldhigga degmada Waaberi ayaa xalay fiidkii gacanta ku dhigay mid ka mid ah Saddex nin oo dhac u geystay shacabka qaar ee ku dhaqan gudaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir.
Madaafiic lagu garaacay xaafad kamid ah Muqdisho.
Mas’uul si deg deg ah ula kulmay ganacsatada Koonfur Afrika ee la dhacay.